Maitiro ekuchenesa iyo Xbox One koni pasina kuikuvadza - VidaBytes | LifeBytes
Networks muNetiweki | | Technology
Chimwe chezvikamu zvakakosha zvekuve neXbox kuri kuichengeta yakachena uye ichishanda, kunyanya kudzivirira kukuvara kwemukati kubva kuguruva-kuvaka. Pano isu tichakudzidzisa maitiro ekuchenesa Xbox One:
Kuchenesa kunze kweXbox One, shandisa microfiber mucheka kubvisa zvigunwe, tsvina, kana mamwe matsi. Izvi zvinofanirwa zvakare kubvisa yakawanda yeguruva iyo inowanzo kuunganidzwa pamidziyo yemagetsi, kunyanya iya inochengetwa mumakabati kana pasi peterevhizheni.
Pamusoro pechitarisiko chekunze, iwe unogona kuona kuti yako fan fan inowedzera ruzha mushure memaawa mazhinji ekushandisa. Kune vamwe, iko kuita ruzha uku kunotokonzeresa kunonoka mutambo wemitambo kana zvimwe zvinhu.
Kugadzirisa izvi, shandisa gaba remhepo yakamanikidzwa kubvisa guruva. Ive neshuwa yekubvisa mudziyo wako usati watanga chero yekuchenesa kuti urege kumwe kukuvara kana kukuvara.
Microsoft haikurudzire kuti iwe uedze kuvhura iyo koni yemutambo uye inokukurudzira kuti utsvage rubatsiro rwehunyanzvi kune chero kugadziriswa kwemukati. Kusiyana neXbox 360, iyo Xbox One haina faceplate inobviswa. Microsoft inoyambira zvakare pamusoro pekushandisa chero mhando yemvura yekuchenesa, sezvo kunyangwe kushandisa zvine hungwaru kunogona kutungamira mukukuvadzwa kwehunyoro kune iyo koni yekufefetedza system.
Matipi ekuchenesa Xbox One
Heano maitiro ekuchenesa yako Xbox One, pamwe nezvinhu zvauchazoda kuti uzviite.
Dzinga yako Xbox Rimwe.
Kutanga nekushandisa microfiber jira kuchenesa kunze kwese. Aya anowanzo kuve machira elenzi akafanana ayo anoshandiswa kumagirazi. Dzimwe shanduro dzekuchenesa dzinonzi micheka yeguruva.
Shandisa jira kunyatsochenesa kunze kweconsole yako, kusanganisira kumusoro, pasi, kumberi, kumashure, uye mativi echigadzirwa. Kugara uchichenesa kunodzivirira guruva rakawanda kubva mukuunganidza, izvo zvingangoda machira akati wandei kuti uchenese mudziyo wako. Shandisa denderedzwa kutenderera kukwiza zvigunwe zvemunwe kana smudges pane epurasitiki mativi echinhu chako, kusanganisira kumberi nekumusoro.
Mushure mekuchenesa kunze kweXbox yako imwe, shandisa gaba remhepo yakamanikidzwa kubvisa zvakanyatso gadzira chero guruva mukati mezviteshi. Aya magaba anogona kutengwa mumhando dzakachipa kana dzinodhura.
Zvisinei nerudzi rwaunoshandisaShandisa kuputika kupfupi kubvisa kuvaka-kumusoro kumatokisi epashure uye mahedheni ekoni yako. Ita shuwa kuti waburitsa chishandiso usati wachenesa kumashure kwemashure.
Enda pamusoro pekunze zvakare nejira kubvisa guruva rakagara pane yako kifaa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Maitiro ekuchenesa yako Xbox Rimwe koni pasina kukuvadza
PS4 yechipiri-inotengesa zvakanyanya koni yenguva dzese
Chii chinonzi Smart TV chinoita